४० वर्ष कटेका महिलाको ठूलो संख्या विवाहेत्तर सम्बन्ध राख्न चाहान्छन्, आखिर किन ? – " कञ्चनजंगा News "
४० वर्ष कटेका महिलाको ठूलो संख्या विवाहेत्तर सम्बन्ध राख्न चाहान्छन्, आखिर किन ?
No Comments on ४० वर्ष कटेका महिलाको ठूलो संख्या विवाहेत्तर सम्बन्ध राख्न चाहान्छन्, आखिर किन ?
एजेन्सी, ४ असार । भनिन्छ जीवनमा एकपटकमात्रै विवाह गरिन्छ । विवाह गरेपछि वैवाहिक सम्बन्धलाई बचाउन र राम्रो बनाउन मै बढी जोड दिइन्छ । वैवाहिक सम्बन्ध यस्तो सम्बन्ध हो जुन संसारका हर कोहिका लागि जीवनभरीको साथ हो । जसमा विश्वास र माया भरिएको हुन्छ ।
← उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ-उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले पठाएको व्यक्तिगत पत्र पाए → जान्नुहोसकस्ता व्यक्तिले माछाको मासु खानुहुँदैन?